ဆိပ်ကမ်းများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၄ နာရီ ဆောင်ရွက် ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း | UMFCCI
ဆိပ်ကမ်းများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၄ နာရီ ဆောင်ရွက် ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း
Written by UMFCCI Administrator // May 25, 2016 // Notifications, UMFCCI News // No comments
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၏ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကုန်တင်ကုန်ချအခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သဘောင်္လိုင်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုန်သေတ္တာတင် မော်တော်ယာဉ်အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ညိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများအား ၂၄ နာရီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ သဘောင်္လိုင်း အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယာဉ်အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ (၂၄) နာရီ သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းနှင့် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ (၁) ရက် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရ မည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ပိုလုပ်ခများကိုလည်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၏ ညီနောင်အသင်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Customs at Yangon Sea Ports operate 24 hours daily to ease trade delays
From today Yangon sea ports will operate around the clock to ease the serious delays and log-jams impacting Myanmar’s export and import businesses.
U Aye Lwin, Joint Secretary-General at the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) said the 24-hour operation was necessary to clear the back-log so the rate of both imports and exports would improve.
Minister of Commerce, Dr Than Myint announced this month that solving Yangon’s ports dilemma wasapriority for the new Myanmar Government.
Deputy Director-General of the Customs Department, U Sann Lwin said after the meeting that the 24-hour daily operations could start from today and that the Customs Department had notified Myanmar Port Authority, Shipping Companies and Container Trucks Association about the changes.
Joint Secretary-General U Aye Lwin said: “Most countries around the world use round-the-clock loading and unloading processing services.
“Our trading system will be able to develop quickly now that we have introduced this fast-track method too, especially if Customs Clearance is also stream-lined.
“Hopefully, the traffic jams around Yangon Ports will also ease now that the container trucks will be able to deliver and clear their loads at night.”
Import/Export businesses wanting clearance of their goods out of normal office hours must notify the Customs Departmentaday in advance and pay over-time fees.